10 Izindawo Zama-Epic Zokuvakashela E-China | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China > 10 Izindawo Zama-Epic Zokuvakashela E-China
Ukuhamba Ngezitimela, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 07/02/2021)
Izwe lezinganekwane, Amakhosi, amasiko, nabantu abakha iChina enkulu yemilingo, ikhaya le 10 izindawo ezinhle kakhulu zokuvakashela eChina. Yonke indawo iyamangaza, exoxa izindaba zasendulo kuwo wonke amatshe egobongo, kwebhuloho, namanzi acwebile we 1000 emachibini.
Okulandelayo 10 izindawo ezinhle kakhulu zokuvakashela eChina, babe abahambi abathandekayo izinkulungwane zeminyaka, ngakho-ke lungela uhambo lokuphila konke.
1. Indawo Epic Yokuvakashela EChina: IZhangye Danxia Landform
Umkhuba omangalisayo wokuma komhlaba, iZhangye Danxia National Park esifundazweni saseGansu isesiqongweni se- 10 izindawo ezinhle kakhulu zokuvakashela eChina. Ngo 2009, "Ifu elibomvu" iPaki likazwelonke laseDanxia laba yindawo yamagugu emhlabeni ye-UNESCO.
Izinhlanganisela zepaki ze 50 amakhilomitha square, ukuphumula ngaphansi kwezintaba zeQilian. Lokhu isimanga semvelo kuthathe izinkulungwane zeminyaka ukwakha ubuhle obuheha abahambi abavela emhlabeni wonke. Indawo eyake yaba ulwandle, kancane kancane yaguqula ukwakheka kwayo komhlaba kwaba iziqongo nemizila, kusuka ku-orange kuya kokuluhlaza okotshani, muhle ngokumangalisayo.
Ngifika Kanjani KuDanxia Landform EChina?
Ungandizela eZhangye usuka eLanzhou ngehora, noma uthathe indlela ye-eco-friendly yokuhamba ngesitimela. Kuphela 6 amahora ngesitimela.
2. Izindawo Zama-Epic Zokuvakashela E-China: Izakhiwo Zelayisi zaseYuanyang
Uma ufuna ukuzidela, khona-ke i-adventure enhle ilinde phansi 3,000 izinyathelo kumasimu erayisi aseYuanyang. Uzothola lezi zindawo ezimangalisayo zelayisi esifundazweni saseYunnan, emithambekeni yezintaba i-Ailao. Abantu bakwaHani abathandekayo badala le ndawo enhle kangaka 2,500 iminyaka edlule.
'Umbazi onekhono "wenza a UNESCO amagugu wezwe indawo ezandleni zabo, eduze komfula obomvu ngaphezu kuka 113 amakhilomitha square. UNovemba ungesinye sezikhathi ezihamba phambili zokuvakashela izindawo zesibili eziqhakazile ukuvakashela eChina.
Ngifika Kanjani KuYuanyang Rice Terrace?
Okokuqala, kufanele ufike edolobheni laseKunming, bese ngebhasi eya eYuanyang. Isitimela esinezinhlamvu esiya eJianshui sizoba yindlela entofontofo kakhulu yokuhamba, bese uthatha ibhasi eliya eYuanyang.
3. Izindawo Zama-Epic Zokuvakashela E-China: Ichibi laseQinghai
Ichibi eliphakeme kunazo zonke eChina, Ichibi laseQinghai liyindawo yesithathu ebabazekayo ukuvakashela eChina. Uma uthatha isinqumo sokuvakashela leli chibi elimangalisayo, kufanele wazi ukuthi iLake Koko Nor, isenyakatho-mpumalanga yeThebetan Plateau. Ngakho-ke, Izindela zaseTibet nezaseTibet zikubheka njengongcwele.
Ngaphezu kwalokhu, isimo sonyaka esishintshayo, yenza ichibi laseQinghai lihle ngokungafani nezinye izindawo eChina. Ungavakashela ngokoqobo iLake Qinghai ehlobo, ekwindla noma entwasahlobo, bese uthola ichibi elihluke ngokuphelele njalo.
Ngifika kanjani eLake Qinghai?
Okokuqala, thatha isitimela uye eXining, bese ungathatha ibhasi noma uqashe imoto echibini laseQinghai.
4. Zhangjiajie – Izinsika Ezinkulu
Ukwakheka okufana nezinsika, ipaki lamahlathi laseZhangjiajie liyisimangaliso semvelo esethusa kakhulu eChina. IZhangjiajie iyisayithi elenziwe ngomusa lokwakheka kwamatshe esihlabathi ongeke ukuthole ndawo emhlabeni. Le ndawo enhle ukuvakashela eChina inokuningi kunoku 200 iziqongo, izigaxa, nezintaba ezikhuphuka nje emhlabeni.
Ngaphezu kwalokho, uzoba nenhlanhla yokuhlangana nabantu abathathu abancane abahlala kule ndawo ekude, nezinhlobo ezisengozini yokuqothulwa njengezinyamazane zamanzi zaseChina kanye nentulo enkulu yaseChina.
Ngifika Kanjani Kuzakhiwo Zhangjiajie?
Uma usuka eBeijing, Shanghai, noma uXian, bese uthatha isitimela esiya eZhangjiajie.
5. Jiuzhaigou – Amachibi Alpine Anemibala
Izimpophoma ezimangalisayo, emachibini, 9 Imizana yaseTibetan, futhi kakhulu nezindawo ezinhle, yenza isigodi saseJiuzhaigou sibe yinye ye- 10 izindawo ezingamaqhawe zokuvakashela eChina. Uzothola iJiuzhaigou ebangeni lezintaba iMin Shan, futhi empeleni iyi- esiqiwini.
Ekuphakameni kwe 2,472 m. uzothola i-Five Flower Lake. Kulufanele ngokuphelele uhambo ngenxa yemibala ehlukile, umphumela wedwala elingezansi kwechibi le-travertine, and colorful algae. Lezi 2 amaqiniso adala umphumela wechibi le-Alpine iziqongo namanzi aluhlaza okwesibhakabhaka azungezwe izilwane ezinhle.
Ngifika Kanjani KuJiuzhaigou?
Uzodinga ukufika eChengdu, inhlokodolobha yesifundazwe saseSichuan eningizimu-ntshonalanga yeChina ngebhasi nokundiza.
6. Isifundazwe saseNtshonalanga Sichuan – IDaocheng Yading Nature Reserve
Uma uhlela i-escapade eya esimweni esihle saseChina, iziqongo seqhwa, amachibi acwebile, nokuhamba izintaba epharadesi, lapho-ke indawo yokulondolozwa kwemvelo ye-Yading ikulungele. Uzothola le ndawo enhle esifundazweni saseSichuan eChina, futhi kungcono wenze isikhathi okungenani 2-3 izinsuku, ukuthola zonke izimangaliso zayo.
I- "Last Shangri-La" iyikhaya lamaChianrezig amathathu, Jambeyang, nezintaba zeChanadorje, ezakha ukwakheka konxantathu, futhi lapho uzothola khona imibono emihle kakhulu eDaocheng. Ngaphezu kwalokho, kungcono uzilungiselele 1,000 emachibini, phakathi kwazo kukhona echibini le-Erong "Ubisi", kanye nechibi elimangalisayo le-Five Colour Danzhen ku 4,600 amamitha.
Ngifika Kanjani KwaDaocheng Yading?
Uma ufushane ngesikhathi, bese undizela esikhumulweni sezindiza i-Yading, bese uthatha ibhasi yesikhumulo sezindiza eya eDaocheng. Ungathatha futhi ibhasi eliya eShangri-La, futhi ukusuka lapho thatha ibhasi yokubuka indawo eya eYading. Nokho, uma ufuna ngempela ukuthola le ndawo enhle eChina, bese ulala eDaocheng.
7. Izindawo Zama-Epic Zokuvakashela E-China: UFenghuang, Isifundazwe saseHunan
I-Fenghuang ingenye yezindawo zendabuko ku 10 izindawo ezibabazekayo ongazivakashela ohlwini lwaseChina. Leli dolobha eligcinwe kahle lakhiwa e Ubukhosi be-Qing futhi igcine umoya wayo wasendulo nemibono ngaphezulu 300 iminyaka.
Ngakho-ke, lapho ungena kuleli dolobha elihle, uzozizwa ukuthi uhamba ngokoqobo emuva ngesikhathi. Izindlu zedolobha zamapulangwe, amabhuloho, amathempeli awathintwa yisikhathi futhi enza isimo esimangalisayo emini noma ebusuku.
Ngokuya ngezindaba, leli dolobha laqanjwa igama lalo “iPhoenix” lapho 2 IPhoenix ibingafuni ukuhamba ngoba yinhle kakhulu, ngakho bahlala ukuyibuka.
Ungafika Kanjani eFenghuang?
Kukhona amabhasi kuphela aya eFenghuang, azikho izitimela. Ungathatha ibhasi emadolobheni aseduze eHunan, njengoChangsha, noZhangjiajie.
8. Izindawo Zama-Epic Zokuvakashela E-China: I-Great Wall yaseChina
IGreat Wall yaseChina ingesinye sezimangaliso zomhlaba, ngakho-ke kusobala ukuthi ifaka eyethu 10 izindawo ezinhle kakhulu zokuvakashela eChina.
Okwedlulile 2,300 iminyaka iGreat Wall yaseChina ibusa indawo yaseNyakatho yeChina, futhi kuyisici esivelele salo lonke uhambo oluya eChina. Ngeshwa, eminyakeni edlule ngenxa yokuguguleka kwemvelo nokulimala kwabantu 2,000 Amakhilomitha asukile kuloluphawu oluvelele.
Kufanele wazi ukuthi uma uphupha ngokuhamba udonga lonke, kuzokuthatha 18 izinyanga okungenani ukuqedela i-Great Wall of China walk.
Ngifika Kanjani Ku Wall Omkhulu Wase China?
Ungathatha isitimela ukusuka eBeijing uye eBadaling station station, bese uthatha ibhasi yokuhamba yamahhala uye ehhovisi lamathikithi eBadaling Great Wall.
9. Izindawo Zama-Epic Zokuvakashela E-China: Ichibi laseQiandao
Ngaphezulu kuka 1000 iziqhingi, Ichibi laseQiandao lingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni, ingasaphathwa eyaseChina. Uzothola leli chibi elihle ezweni laseChunan, Isifundazwe saseZhejiang, ukumboza indawo ye- 580 amakhilomitha square.
Ichibi lesiqhingi eliyinkulungwane lenziwe ngabantu futhi lenziwa ngemuva kokudalwa kwedamu e- 1959. Uma unenhlanhla eyanele yokuya echibini laseQiandao eChina, uzoba nesikhathi esihle sokuthola amachibi amaningi epaki yehlathi.
Ungafika kanjani eQiandao Lake?
The best way to travel to Qiandao lake is by taking the train from Hangzhou to Qiandaohu Station then take the taxi to Ichibi laseQiandao.
10. Izindawo Zama-Epic Zokuvakashela E-China: Idolobha Lasendulo laseLijiang
ILijiang yidolobha lesibili elidala kwelethu 10 izindawo ezibabazekayo ongazivakashela ohlwini lwaseChina, nenye ye 4 amadolobha amadala agcinwe kahle eChina. Amathempeli ka-Lijiang, ukwakheka okuhlukile kweNaxi kwezindlu zakudala ezifulelwe ngothayela ezinegceke elibiyelwe, kungumbono impela.
Njengoba uhamba ngeLijiang's ezitaladini cobbled, izibani ezibomvu ngenhla, bese uthola i- 354 amabhuloho, uzomangala futhi uthakazelwe yisiko labantu baseNaxi, nezakhiwo.
Ngifika Kanjani Fenghuang Idolobha Lasendulo?
Indlela engcono yokufika eLijiang idolobha lasendulo ngokuthatha i- Isitimela samaShayina esiteshini sesitimela saseLijiang, bese ngebhasi noma ngemoto.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo lwakho lokuya kulezi 10 izindawo eziningi amaqhawe ukuvakashela eChina ngesitimela.
Dufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi yethu "10 Izindawo eziningi ze-Epic ongazivakashela EChina”Kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fepic-places-visit-china%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)